Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : /bins/ohabolana/tsiny
Proverbe 470 Andriamanitra tsy omen-tsininy , Zanahary tsy omem-pondro , fa ny olombelona no be siasia . [Veyrières 1913, Rinara 1974]
Proverbe 804 Aza atao famaky manan-tsiny amin’ izay kiakiak’ akoho . [Houlder 1895 #156, Cousins 1871 #340]
Proverbe 1303 Aza manome tsiny ny havana fa ny vitanao no tadidio . [Rinara 1974 #694]
Proverbe 1610 Basy tapaka talata : tsy ananan-tsininy . [Rinara 1974]
Proverbe 2185 Fotsimbary tsy ilaozan' akatatra (akotry ) ary lohan' omby tsy ilaozan-delany . [Rinara 1974 #1203]
Proverbe 2762 Jereo ny atao vao manome tsiny . [Veyrières 1913 #6504]
Proverbe 3693 Mandihy be volon-kelika : mahay manan-tsiny , tsy mahay manampondro . [Cousins 1871 #1588]
Proverbe 4522 Mizara be mahahendry , mizara kely maha-adala (ahazoana tsiny ). [Rinara 1974 #2531]
Proverbe 4598 Mpanao soa am-po ka ihandronan' ny tsiny . [Rinara 1974 #166]
Proverbe 5551 Ny tenda toy ny razan-dratsy : omem-be , tsy mahatahy ; omen-kely , manome tsiny. [Cousins 1871]
Proverbe 5594 Ny tokan-trano tsy ahahaka . [Cousins 1871 #2504, Nicol 1935 #63]
Proverbe 5650 Ny tsiny azo sorohina , fa ny tody tsy misy fanafana . [Rajemisa 1985]
Proverbe 5651 Ny tsiny fandravana fa ny saotra fitomboana . [Rinara 1974 #213]
Proverbe 5652 Ny tsiny lala-malama : izay tsy miala no lavo . [Veyrières 1913 #3604]
Proverbe 5653 Ny tsiny maiva-mavesatra . [Rinara 1974 #214]
Proverbe 5654 Ny tsiny toy ny rano an' ambo : tsy hita koa mahavoa . [Rajemisa 1985 #61]
Proverbe 5655 Ny tsiny toy ny rivotra : mikasika ny tena fa tsy hita tarehy . [Houlder 1895 #150, Veyrières 1913 #6482, Rinara 1974 #3335, Cousins 1871 #2526]
Proverbe 5656 Ny tsiny tsy mba mivongovongo tahaka ny rahona, fa misokosoko tahaka ny fanala, tsy hita ka mahangoly . [Cousins 1871 #2456, Nicol 1935 #275]
Proverbe 5665 Ny vady hariam-be tsiny . [Veyrières 1913 #1394, Cousins 1871 #2459]
Proverbe 5854 Omby maty an-tsena: ny mahia manana adidy , ary ny matavy manana antsa. [Cousins 1871 #2552]
Proverbe 5938 Petak' orona sy dondon-kandrina : ny iray iva tsy anomezan-tsiny , ny iray avo tsy anomezam-pondro , fa izay vitan- -Janahary ifaliana . [Rinara 1974 #3491]
Proverbe 6180 Raha tsy manao be fondro, manao be tsiny. [Houlder 1895 #152]
Proverbe 7751 Tsy misy mahita kilema momba tena . [Houlder 1895 #136, Cousins 1871]
Proverbe 7861 Tsy rafozana toa bohaka . [Veyrières 1913 #1481]
Proverbe 7939 Vady ananan-doloha , adidy hananana tsiny . [Rinara 1974 #310]
Proverbe 8133 Vehivavy tsara tarehy petaka orona : voantondro iray monja no tsininy . [Veyrières 1913 #1794, Cousins 1871 #3656]